Inkulumompikiswano: amanga anika izimbali, kodwa asikho isithelo “Bangaki abantu base-Afro-French abakhona? Lo mbuzo udinga izinkulumo ezintathu
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Ngo-Okthoba 4, 2020 00: 20 Awekho amazwana
Esokuqala ukuthi izibalo "Zobuhlanga" (okuningi ongakusho ngokobuhlanga) zivinjelwe eFrance ngoba zingabhebhethekisa ubandlululo ngokubopha izakhamizi noma abahlali ngokwebala labo (okungenzeka ukuthi ngaphandle kwamaphoyisa, okungenani ngenhloso yokuthola kangcono abantu abafunwayo ...)
Ukuphawula kwesibili ukuthi incazelo ye-Afro-French idala inkinga. Uma sigcina i-phenotype, singasho ukuthi siyi-Afro-French inqobo nje uma singabonakala kanjalo, cishe kuze kube sesizukulwaneni sesithathu uma kwenzeka sizalisana esizukulwaneni ngasinye.
Thatha isibonelo samaDuma. Uma ucabanga lokho Cesette, umama kaGeneral Dumas, wayevela 1ère isizukulwane, ukuthi indodana yakhe (ixubekile ngenxa yobumbano lwe Cesette neMarquis de La Sequin, I-Euro-French) wayevela ku-2, no-Alexandre Dumas (indodana kaGeneral Dumas nowesifazane wase-Euro-French waseVillers-Cotterêts) we-3, siyaqaphela ukuthi u-Alexandre Dumas umbhali, ngenxa ye-phenotype yakhe, wabonwa njengesiqalo se-Afro, kepha ukuthi lokhu kwakungenjalo ngendodana yakhe (U-Alexandre Dumas, indodana) ngubani, omnyama ngamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, owayengadlula ozalweni lwe-euro (Lokhu akuzange kumvimbe ekuziqiniseni njengo-Afro-inzalo, kodwa lokho bekungukukhetha.)
Ukuphawula kwesithathu ukuthi kuphakama omunye umbuzo: kufanele noma singabala phakathi kwezakhamizi zase-Afro-French ezingezona ezemvelo (ngokulandelana noma cha).
Lezi zinkulumo ezenziwayo, singalinganisa cishe ngokulinganayo ukuthi eFrance enezinhlangothi eziyisithupha, kuzoba okungenani ama-1 Afro-French aqhamuka ezindaweni ezingaphesheya kwezilwandle zaseFrance. (cishe 1/3 isizukulwane ngasinye), Abantu baseHaiti abangu-10 000, nabangu-1 900 000 abavela e-Afrika eseningizimu yeSahara (kucatshangelwa abantu abangenamvelo noma ngabe basesimeni esihle noma cha) noma ingqikithi ye-3 Afro-French yeFrance enezinhlangothi eziyisithupha.
Singangeza kulesibalo i-1 French Afro-inzalo ehlala e-Overseas Territories kanye ne-200 Haitians.
Sekukonke, mhlawumbe okungenani ama-4 ama-Afro-French, noma cishe ama-350% wabantu baseFrance.
Phakathi kwalaba base-Afro-French, ngaphezu kwengxenye yamaFulentshi aphesheya kwezilwandle noma aphesheya kwezilwandle, ngakho-ke okungenani u-3,3% wenzalo yezigqila.
I-Oct29 09: 09